राजस्थान बाहिरिनुको प्रमुख तीन कारण | Hamro Khelkud
राजस्थान बाहिरिनुको प्रमुख तीन कारण
एजेन्सी– इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) २०२० मा उत्कृष्ट सुरुवात गरेपनि कमजोर अन्त्य गरेपछि राजस्थान रोयल्स पुछारमा रहेर लिग चरणबाटै बाहिरिएको छ ।
पहिलो संस्करणको च्याम्पियन राजस्थान यस सिजनमा १४ खेलमा ८ मा हार र ६ मा जित सहित १२ अंक जोड्दै पुछारमा रहेर आफ्नो यात्रा अन्त्य गर्यो । स्टिभ स्मिथको कप्तानीमा रहेको राजस्थान सुरुवाती दुई खेलमा उत्कृष्ट जित निकालेको थियो । पहिलो खेलमा चेन्नईलाई १६ रनले हराउँदा पन्जाबमाथि रोमान्चक ४ विकेटको जित दर्ता गर्यो । पन्जाबले प्रस्तुत गरेको २ सय २४ रनको विशाल लक्ष्य तीन बल अगाडि पूरा गर्दै सनसनीनै मच्चाएको राजस्थानले त्यसपछि भने लगातार चार खेलमा जित निकाल्न सकेन ।
कोलकातासँग ३७ रन, बेंगलोरसँग ८ विकेट, मुम्बईसँग ५६ र दिल्लीसँग ४६ रनले पराजित भएको थियो । हैदराबादलाई ५ विकेटले हराउँदै खेलमा फर्किने संकेत देखाएको थियो । तर दिल्लीसँग १३ रन र बेंगलोरसँग ७ विकेटले पराजित हुँदै प्ले अफ कठिन बनेको थियो । चेन्नईलाई ७ विकेटले हराउँदा हैदराबादसँग ८ विकेटले हार्न पुग्यो । तर अन्य टोलीको नतिजा आफूअनुकु आउँदा प्ले अफको सम्भावना कायमै रहेको थियो ।
मुम्बईलाई ८ विकेट र पन्जाबलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै प्ले अफको सम्भावना कायमै राखेको थियो । तर जित्नै पर्ने अन्तिम खेलमा कोलकातासँग ६० रनले पराजित भएपछि अघिल्लो चरण समाप्त हुन पुग्यो । समग्रमा राजस्थान लिग चरणबाटै बाहिरिनुका प्रमुख तीन कारण यस प्रकार छन् ।
३. बलिङमा आर्चरले साथ नपाउनु
यस सिजनको आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सका तीव्र गतिका बलर जोफ्रा आर्चर बाहेक अन्य खेलाडीको प्रर्दशन कमजोर रह्यो । आर्चरले कुल २० विकेट लिए । इकोनमी ६.५५ रह्यो । तर अन्य बलरको प्रर्दशन निकै कमजोर रह्यो । कार्तिक त्यागिले ९ खेलमा १० विकेट लिए । उनको इकोनमी ९.६१ रह्यो । जयदेव उनादकटले ७ खेलमा ४ विकेट लिए । उनादकटको इकोनमी ९.९१ रह्यो ।
अंकित राजपुतले ६ खेलमा २ विकेट लिए । इकोनमी झन्डै १२ को रह्यो । बरुण आरोनले ३ खेलमा विकेट लिन सकेनन् । टम करनले ५ खेलमा ३ विकेट लिएका थिए । आर्चरको चार ओभर छोड्ने हो भने अन्य कुनैपनि तीव्र गतिका बलरले खेलमा पकड जमाउन सकेनन् । दुई स्पिनर श्रेयस गोपाल र राहुल टेवाटियाले १०–१० विकेट लिए ।
आर्चरलाई साथ दिने अन्य एक तीव्र गतिको राम्रो बलर भएको भए नतिजा सायद अकै आउन सक्थ्यो । तर राजस्थानमा त्यसो हुन सकेन । राजस्थानले हारेका ८ खेल मध्य ५ खेल लक्ष्य पछ्याउँदा थिए । तीन हार राजस्थानले योगफल बचाउन नसक्दा थियो । राजस्थान बेंगलोरसँग लिग चरणको पहिलो खेलमा ८ विकेटले पराजित भएको थियो । उक्तक्रममा १ सय ५५ रनको लक्ष्य बेंगलोरले ५ बल अगाडि २ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको थियो । आर्चरले ४ ओभरमा १८ रन खर्चेर १ विकेट लिएका थिए । यो एक उदाहरण मात्रै हो । यसरीनै आर्चरले खेलमा साथ पाउन सकेनन् । आर्चरले राम्रो साथ पाउँथे भने राजस्थानले प्ले अफमा स्थान बनाउन सक्थ्यो ।
२. शीर्षक्रममा निर्भर ब्याटिङ
राजस्थानको जितमा शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यानको प्रर्दशन निर्भर रह्यो । सुरुवाती दुई खेलमा जित दिलाउन सन्जु स्यामसन र स्टिभ स्मिथले अर्ध शतक प्रहार गरेका थिए । दुबै खेलमा स्यामसन प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका थिए । लगातार चार हार हार्नुको प्रमुख कारण स्मिथ र स्यामसनको कमजोर प्रर्दशन थियो । हैदराबादलाई हराउन तल्लोक्रमका राहुल टेवाटिया र रियान परागले उच्च प्रर्दशन गरेका थिए । चेन्नईलाई ७ विकेटले हराउन मध्यक्रमका जस बटलरले ७० रननको इनिङ खेलेका थिए । मुम्बईलाई ८ विकेटले हराउन स्टोक्सले ओपनिङ गर्दै शतक प्रहार गरेका थिए ।
पन्जाबविरुद्ध पनि ओपनरहरुको उच्च प्रर्दशन थियो । समग्रमा हेर्दा राजस्थानको जितमा शीर्षक्रम ब्याट्सम्यानको बढि योगदान छ । राजस्थानको सबै हारमा शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यानको प्रर्दशन कमजोर छ । जारी सिजनमा राजस्थानबाट तीन ब्याट्सम्यानले ३ सय भन्दा बढी रन बनाए । जस बटलर २ सय २८, सन्जु स्यामसन ३ सय ७५ र कप्तान स्टिभ स्मिथ ३ सय ११ रन जोडेका थिए । जसले गर्दा मध्यक्रम र तल्लोक्रमका ब्याट्सम्यानले उच्च प्रर्दशन गर्न सकेको भए सम्भव त राजस्थान प्ले अफमा पुग्न सक्थ्यो ।
१. स्टोक्स सुरुमा उपलब्ध नहुनु
इंग्ल्यान्डका चर्चित अलराउन्डर बेन स्टोक्स आफ्नो बिरामी बुबाको हेरचाहको लागि न्युजिल्यान्डमा रहँदा सुरुवाती आइपिएल गुमाएका थिए । स्टोक्सले सुरुवाती ६ खेल गुमाएका थिए । उक्त ६ खेल मध्य ४ मा राजस्थान पराजित भएको थियो । स्टोक्सले हैदराबादविरुद्ध पहिलो खेल खेलेका थिए । उक्त खेलमा राजस्थान ५ विकेटले विजयी हुँदै लगातार चार खेलेको हारको सिलसिला रोकेको थियो । स्टोक्सले खेलेका कुल ८ खेल मध्य चार खेलमा राजस्थान विजयी भयो । जसमा स्टोक्स दुई खेलमा लगातार प्लेयर अफ द म्याच चुनिए ।
मुम्बईले प्रस्तुत गरेको १ सय ९६ रनको विशाल विजयी लक्ष्य पछ्याउने क्रममा राजस्थानले १८.२ ओभरमै जित निकालेको थियो । जसक्रममा स्टोक्स १ सय ७ रनमा अविजित रहँदै प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका थिए । पन्जाबलाई ७ विकेटले हराउन पनि स्टोक्सले अलराउन्ड प्रर्दशन गर्दै प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका थिए । १ सय ८५ रनको लक्ष्य राजस्थानले १७.३ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको थियो । जसक्रममा स्टोक्सले आक्रामक ५० रन जोड्नुको साथै २ विकेट लिएका थिए । समग्रमा स्टोक्सले ८ खेलमा २ सय ८५ रन बनाउँदा २ विकेट लिए । सायद स्टोक्स सुरुवात देखिनै आइपिएल खेल्थे भने राजस्थानको नतिजा अर्कै हुन सक्थ्यो ।